Global Voices teny Malagasy » Lalao Olaimpikan’ny Andro Ririnina – Pyeongchang 2018: Fandraisana Anjara Betsaka Nataon’ireo Atleta Afrikanina · Global Voices teny Malagasy » Print
Lalao Olaimpikan'ny Andro Ririnina – Pyeongchang 2018: Fandraisana Anjara Betsaka Nataon'ireo Atleta Afrikanina
Voadika ny 26 Febroary 2018 12:35 GMT 1	 · Mpanoratra Abdoulaye Bah Nandika Ntsoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Afrika Mainty, Afrika Atsimo, Eritrea, Ghana, Kenyà, Madagasikara, Maraoka, Togo, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka
Nanamarika ny fisiany i Nizeria nandritra ny fety maroloko fanokafana ny Lalao Olaimpika amin'ny andro Ririnina 2018.
Tranga mahafinaritra foana ny fisian'ny firenena Afrikanina amin'ny lalao Olaimpika amin'ny andro ririnina. Tamin'ny taona 1960, i Afrika Atsimo irery ihany no nanao ny lalao Olaimpika. Tamin'ny lalao Olaimpika amin'ny ririnina andiany fahavalo tao amin'ny Squaw Valley tany Etazonia izany.
Tamin'ny Lalao Olaimpika ny andro ririnina 2018 tany Pyeongchang, izay nanomboka ny 9 Febroary, ireto firenena Afrikanina  valo ireto dia manana solotena iray farafahakeliny. Afrika Atsimo, Eritrea, Ghana, Kenya, Madagasikara, Maraoka, Nigeria sy Togo dia samy nandefa atleta iray any amin'ny Lalao Olaimpika ny andro ririnina 2018 (9 hatramin'ny 25 Febroary any Pyenongchang). Miisa 13 izany iireo atleta.
Ireo fanatanjahantena amin'ny ririnina dia tsy ny baolina kitra, betsaka ireo olana amin'ny fanaovana azy ireny. Izany no manazava ny mahatonga ireo atleta Afrikanina any an-kafa no mivoatra, lavitry ny firenena izay tokony ho soloiny tena.
Mamerina mitety  ireo olana izay manomboka any amin'ny famoronana federasiona ho an'ireo taranja ka hatrany amin'ny fitadiavana famatsiambola i Carole KOUASSI:
Rehareha ho an'ilay kaontinanta izay tsy manafina ireo fahasahiranana natrehana sy ho hatrehan'ireo atleta Afrikanina, indrindra ireo ao atsimon'i Sahara. Voalohany indrindra, ireo maripàna mangatsiaka be an'ireo firenena mampiantrano ny lalao, izay mifanohitra tanteraka amin'ireo hita any amin'ny Afrika atsimon'i Sahara. Vokatr'izany, ny ankabeazan'ireo atleta misolo tena ny kaontinanta dia teraka na nampiofanina ivelan'ny Afrika.
Taonan'ny fanombohana lehibe
Fahasahiranana hafa, ny tsy fahampian'ny famatsiambola. Ny momba ny ekipa bobsleigh Nizerianina no tena mibaribary. Tsy maintsy nanao fitadiavambola ireo tanora vavy telo izay mandrafitra ilay ekipa, mba handoavana ny fiofanana sy ireo fitaovana.
Talohan'izy ireo, tsy maintsy nisedra olana toa izany ireo atleta Afrikanina. Tamin'ny taona 1984, ilay Senegale Lamine Guèye, ilay Afrikanina mainty voalohany indrindra nandray anjara tamin'ny lalao Olaimpika amin'ny andro ririnina, dia namorona ny federasiona Senegale ho an'ny Ski, ary vao haingana, namorona ny federasiona ski Etiopianina i Robel Teklemariam alohan'ny nanombohany nanao ny lalao Olaimpika ny ririnina tamin'ny 2006.
Na izany aza, araka ny fanamafisan ‘ny qz.com azy, ho an'ireo atleta sasany ireo dia tsy izao no fandraisana anjara voalohany:
But there’s a bigger record up for grabs for all 13 African athletes in Pyeongchang, South Korea: becoming the first African to win a Winter Olympics medal .
Maro amin'ireo atleta Afrikanina no mametraka tantara tamin'ny fandraisana anjara fotsiny, fa kosa i Mathilde-Amivi Petitjean sy i Adam Lamhamedi dia efa be traikefa, efa nisolo tena an'i Togo sy Maraoka tamin'ny Lalao 2014 tao Sotchi, tany Rosia. Lasa Ganeanina voalohany mandray anjara amin'ny Skeleton i Akxasi Frimpong ary i Sabrina Simader sy i Mialitiana Clerc kosa dia lasa vehivavy voalohany misolo tena an'i Kenya sy i Madagasikara. Ny ekipa bobsleigh Nizerianina ihany koa dia lasa afrikanina voalohany nandray anjara tamin'ny lalao.
Kanefa misy medaly mbola tena manan-danja kokoa ao Pyeongchang ho an'ireo atleta Afrikanina 13 ireo, ao Korea Atsimo: ho lasa Afrikanina voalohany hahazo medaly  Olaimpika amin'ny andro ririnina.
Atolotr’ i Vincent DEGUENON  tsirairay avy ireo atleta Afrikanina, amin'ny fanazavàna ny fomba nahatonga azy ireo hisolo tena ireo firenena izay tsy dia misy mahafantatra ary marihany  fa:
Manao fanatanjahantena izay tsy fantatra ao amin'ilay firenena izay soloiny tena ny sasany amin'ireo atleta ireo. Maro amin'izy ireo no teraka sy/na nitombo tany andafin'ny riaka, tany amin'ny toerana ahazoan'ny fanatanjahantena fanao amin'ny ririnina vahana kokoa, ary nisafidy ny handray anjara amin'ireo lalao ireo, izay ho an'ny sasany dia miainga amin'ny sainam-pirenena iray mankany amin'ny hafa, ary ny sasany amin'ny alalan'ny fahafantarany ireo fototra niaviany.
Handray anjara amin'ny bobsleigh tsiroaroa i Seun Adigun, i Ngozi Onwumere sy i Akuoma Omeoga, izay samy Nizerianina metisy Amerikanina avokoa. Teraka tao Chicago, i Adigun dia efa teo tamin'ny 100 metatra nandritra ny Lalao Olaimpika tany Londres. Niaraka tamin'ny Onwumere, izay avy any Dallas, sy Omeoga, avy any Minnesota, izy ireo no mandrafitra ny ekipa bobsleigh afrikanina voalohany amin'ny tantaran'ny Olaimpika.
Handray anjara amin'ny fifaninanana Skeleton ho an'ny vehivavy i Simidele Adeagbo. Teraka tao Toronto avy amin'ny ray aman-dreny Nizerianina ary niaina tany Nizerià nandritra ny fahazazany, nanome tombony ho an'i Adeagbo ny traikefa tamin'ny fihazakazahany mba handray anjara, telo volana lasa izay, tamin'ny hazakazaka skeleton voalohany teo amin'ny fiainany, ary voafantina teo amin'ny faha-36 taonany, ka tafakatra tao amin'ny ekipa Olaimpika Nizerianina
Somary manokana ny momba an'i Alessia Afi Dipol, ilay faharoa solotenan'i Togo. Teraka tamin'ny 1 Aogositra 1995 tao Pieve di Cadore, tanàna iray izay misy mponina 4000, kaominina iray ao amin'ny faritanin'i Belluno ao amin'ny faritra Venetie ao Italia. Alohan'ny nisoloany tena an'i Togo tamin'ny slalom lehibe ho an'ny vehivavy, dia niara-niasa tamin'ny Federasiona Italianina momba ny fanatanjahantena fanao amin'ny ririnina izy ary tamin'ny federasiona ski Indianina. Tamin'ny faha-18 taonany tany amin'ny lalao Olaimpikan'i Sotchi, vitany ny naka ny laharana faha 53 ary izy no nitondra ny sainam-pirenen'ilay firenena nanangana azy.
Hazavainy  ny fomba nataony hahatonga azy ho Togolezy:
Manana orinasa ao Togo ny raiko manamboatra fitafy ho an'ny fanatanjahantena. Mifikitra amin'io firenena io izy ary faly aho amin'ny fahafahako mifaninana ho an'i Togo” hoy izy. “Na dia teraka tany Italia aza aho, miaina ary miofana any, dia hiaraka amin'i Togo foana aho manomboka izao, izay toy ny fianakaviana nanangana ahy.”
Ao anatin'ny hafatra navoakany, tamin'ny volana Janoary 2018, tao amin'ny blaoginy, alessiadipol.altervista.org, tsy afeniny  ny hafanam-pony sy ny fifikirany amin'ny lokon'ny firenena izay soloiny tena amin'ny Lalao Olaimpika.
Ry namako, tsy dia ampy intsony ny fotoana ho an'ny lalao Olaimpikaaaa!!! Izahay ato amin'ny ekipa Togolezy dia manomana ny tsara indrindra amin'ity fifaninanana goavana ity!!! Mbola mila mandamina zavatra maro izahay ary vonona ny hiaina tranga mahafinaritra!! ary manao ahoana ny fanomananareo?
Noho izany, mirary soa sy lalao tsara ho an'ireo atleta isika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/26/115082/
 firenena Afrikanina: https://www.olympicchannel.com/fr/
 Mamerina mitety: http://fr.africanews.com/2018/02/08/pyeongchang-2018-les-jeux-olympiques-d-hiver-les-plus-africains-de-tous-les//
 first African to win a Winter Olympics medal: https://qz.com/861576/the-long-route-to-winning-the-first-african-gold-at-the-winter-olympics/
 Vincent DEGUENON: https://beninwebtv.com/author/pageinter/